Australia tour of Zimbabwe, Australia tour of Zimbabwe 2002 score, Match schedules, fixtures, points table, results, news
Australia tour of Zimbabwe 2002
ACB withdraws from 2002 Travelex Tour of Zimbabwe
The Australian Cricket Board (ACB) announced today that due to grave concerns over the safety and security of the Australian cricket team and team management it had been forced to withdraw from the up-coming tour of Zimbabwe.
International Tour Partner Supports ACB
Travelex, the world's largest foreign exchange specialist and international tour partner of the Australian Cricket Board has backed the ACB's decision to cancel the planned Travelex Tour to Zimbabwe.
Australia withdraws from Zimbabwe tour
Australia has withdrawn from its scheduled tour of Zimbabwe.
ICC responds to cancellation of Australian tour of Zimbabwe
The ICC is disappointed that the prevailing circumstances in Zimbabwe have forced the cancellation of the Australian cricket team's tour to the country.
First appointments for new ICC panel umpires and referees
The ICC has announced details of the first appointments for its new panels of international match referees and umpires
ACB confirms Zimbabwe tour
Australian Cricket Board (ACB) Chief Executive Officer James Sutherland today confirmed that Australia's cricket tour of Zimbabwe would go ahead subject to it being satisfied as to the safety of the team and team management.